Ganacsade Caan ah oo la dilay iyo xiisad xoogan oo ka dhalatay - Awdinle Online
Ganacsade Caan ah oo la dilay iyo xiisad xoogan oo ka dhalatay
Wararka laga helayo magaalada Buuhoodle ayaa sheegaya in xalay rasaas xoog leh laga maqlay gudaha magaalada, taas oo sababtay in la dilo nin ka mid ahaa ganacsatada ugu caansan magaalada.
Axmed Maxamed oo ka mid ah dadka reer Buuhoodle ayaa warbaahinta u sheegay, “Nin hubaysan ayaa rasaas ku furay nin ganacsade ah, taasina waxay keentay in inta badan magaalada xiisad culus ka bilaabanto, ganacsigiina xirmo”.
Xiisadan ayaa daba socota dilal todobaadyadii la soo dhaafay halkaasi ka dhacay oo maalintii shalay lasoo gabagabeeyey, kadib markii dhicanyadii ay aanadu ka dhaxeysay heshiis ku gaareen magaalada Buuhoodle.
Ilaa hada lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay rasaastii xalay ka dhaceysay gudaha magaalada oo dadku ay sheegeen inay mudo socotay, waxaana la xaqiijiyey geerida ganacsadahaas oo kaliya.
Next articleDFS oo sheegtay in dowladdo shisheeye uu ka socon waayay Shirka Dhuusamareeb